Kitra vehivavy – «Mada 2018» : hanao ny famaranana ny Sab-Nam sy ny Mifa | NewsMada
Kitra vehivavy – «Mada 2018» : hanao ny famaranana ny Sab-Nam sy ny Mifa
Hotanterahina, anio tolakandro, etsy amin’i kianjaben’ny Mahamasina ny lalao famaranana amin’ny dingana fahatelo eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, taranja baolina kitra ho an’ny sokajy vehivavy. Adin’ny samy ekipan’Analamanga ny fihaonana, hikatrohan’ny AC Sab-Nam sy ny Mifa.
Ekipa diso mifankahalala tsara ny roa tonta satria efa nihaona, nandritra ny fifanintsanana isam-bondrona. Hanala vela amin’ity ny Sab-Nam, izay lavon’ny Mifa, tamin’ny fandakana ny “tirs au but”, 3 no ho 2, rehefa nisaraka ady sahala 1 sy 1 ny roa tonta, tao anatin’ny fe-potoana ara-dalàna.
Hiady ny laharana fahatelo kosa ny Askam Itasy sy ny Asot Analamanga. Ekipa iray tarika ihany koa ny roa tonta, nandritra ity dingana fahatelo ity. Resin’ny tovovavin’Itasy, tamin’ny fandakana ny “tirs au but”, 4 no ho 3, ihany koa ny ekipan’Analamanga, tamin’ity. Nisaraka samy tsy nisy nitoko, ny roa tonta nandritra ny 90 mn nilalaovana.
Marihina fa efa tompondakan’i Madagasikara, ny Askam Itasy. Raha tsiahivina, ity ekipan’Itasy ity hatrany no nahazo ireo dingana roa voalohany.